नयाँ वर्ष २०७६ः केवल १५ दिन सार्वजनिक बिदा
scheduleशनिवार जेष्ठ ११ गते, २०७६
काठमाडाैं, २ चैत । सरकारले २०७६ सालमा १५ दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषण गरेको छ । शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गृह मन्त्रालयले देशैभर १५ दिनमात्र सार्वजनिक बिदा हुने सार्वजनिक गरेको हो ।
वैशाख महिनामा सरकारले नयाँ वर्षका दिन वैशाख १ गते आइतबार र विश्व मजदुर दिवसका दिन वैशाख १८ गते बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको छ । जेठ महिनामा एक दिनमात्र ४ गते शनिबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
असार, साउन र भदौ महिनामा एक दिन पनि देशभर लागू हुने गरी सार्वजनिक बिदा दिइएको छैन । असोज ३ गते शुक्रबार संविधन दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ भने असोज १८ गते शनिबारदेखि २२ बुधबारसम्म अर्थात फूलपातीदेखि एकादशीसम्म ५ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
तिहारका लागि कात्तिक १० गते आइतबारदेखि १२ गते मंगलबारसम्म अर्थात लक्ष्मीपूजादेखि भाइटीकासम्म ३ दिन बिदा दिइएको छ । मंसिर, पुस र माघ महिनामा देशभर लागू हुने गरी बिदा दिइएको छैन । फागुन महिनामा ९ गते शुक्रबार महाशिवरात्रीमा र फागुन २५ गते आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
न्यायाधीशको एउटा फैसलाले दुई खर्बको सरकारी सम्पत्ति गुम्ने खतरा
अख्तियारको छानबिनमाथि नै आशंका
निर्मला हत्याकाण्डः १० महिनासम्म सुराक खोज्दै प्रहरी
मौलाउँदै पारिवारिक अपराध, आफन्त नै ह्रिंसक
बैंकिङ प्रणालीमा थपियो २ खर्ब पुँजी
सांसदको ध्यानै पैसामा
नियमित चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ ? तपाईंलाई हुनसक्छ यस्तो जोखिम
स्थानीयको आरोप- सिसाकाण्ड ढाकछोप गर्दा घट्यो आरुबोटे हत्याकाण्ड
सवा अर्ब पुग्यो पशुपतिको कमाइ
पशुपतिको परिसरमा चर्च
ओझेलमा सहरी गरिबी, पलङ नअट्ने कोठामा गुजारा
छैटौंपटक गोल्डेन बुट जितेपछि मेसी भन्छन्- बुट हैन, लिभरपुलसँगको हार सम्झिरहेछु
एजेन्सी, ११ जेठ । अर्जेटिनी फुटबलका कप्तान तथा बार्सिलोनाका कप्तान लिओनेल मेसीले करिअरको छैटौं युरोपेली गोल्डेन बुट जितेका...
पराजयपछि कांग्रेसमा राजीनामाको श्रृंखला सुरु
काठमाडौं, ११ जेठ । भारतको लोकसभा चुनावमा शर्मनाक पराजयपछि कांग्रेसमा राजीनामाको श्रृंखला सुरु भएको छ । उत्तर प्रदेश, ओडिसा...
सेनाका भ्रष्ट कर्मचारी धमाधम कारबाहीमा पर्दै, कर्नेल नै जेल चलान
फाइल फोटो काठमाडौं, ११ जेठ । भष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू भएपछि नेपाली सेनाका भ्रष्ट कर्मचारीहरु धमाधम कारबाहीमा...
भारतीय कांग्रेसद्वारा राहुल गान्धीको राजीनामा अस्वीकृत
काठमाडौं, ११ जेठ । भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पेश गरेको राजीनामा उक्त पार्टीले अस्विकृत गरेको छ । हालै सम्पन्न...
इरानमाथिको अमेरिकी दबाब गलत: इमरान खान
एजेन्सी, ११ जेठ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिकाले इरानमाथि दबाब दिनु गलत भएको बताएका छन् । इरानी विदेशमन्त्रीसँगको...
औषधि हालेको आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? देखिन सक्छन् यस्ता समस्याहरु
रौतहट, ११ जेठ । देशका विभिन्न ठाउँमा विषादी प्रयोग गरिएका आँप विक्रिवितरण गरिएकाले आँप नखान विशेषज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्...
दुई तिहाई बहुमतका लागि मोदीलाई पुगेन ९ सिट
नयाँदिल्ली, ११ जेठ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी आवद्ध भारतीय जनता पार्टी ३०३ सिटमा विजयी...
को बन्ला बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्री ?
लण्डन, ११ जेठ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको राजीनामाको घोषणासँगै अब उनको उत्तराधिकारीको नाममाथि चर्चा सुरु भएको छ...